नागरिकको स्वास्थ्य चासो- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
नागरिकको स्वास्थ्य चासो
डा. ढुण्डीराज पौडेलको जानकारीमूलक लेख समय सान्दर्भिक छ  ।
प्रकोप पूर्व आवश्यक तयारीका लागि सरकार जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यसका लागि हामी स्वयं पनि तम्तयार हुनु जरुरी छ । आफू र आफ्नो वरपरको वातावरणलाई लामखुट्टेमैत्री बनाउने कि आफ्नो स्वास्थ्य अनुकूल बनाउने ? यसको जिम्मा नागरिक स्वयंले लिने हो भने वर्षेनि देखापर्ने प्रकोपलाई धेरै हदसम्म टाढा राख्न सकिन्छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीनपा–१, कैलाली
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ११:४२
बुधबार प्रकाशित दीप्स शाहको ‘महिला जहाँ पनि असुरक्षित’ उचित लागेन  । आफ्नै देशमा महिला असुरक्षित छन्, त्यसैले अरबमा पनि असुरक्षित हुन जाऔं भन्ने कुरा सही होइन  ।
लेखिकाले इजरायलको कुरा उठाएकी छन् । इजरायलमा राम्रो होला, तर अरबका त दिनहुँ लोमहर्षक कथा सुनिन्छ । निश्चय पनि हाम्रो देशमा त्यस्तो छैन । हाम्रो देशमा महिला असुरक्षित छन्, तर अरबमा जत्तिको चाहिँ छैन । बलात्कार बारेको तथ्यांक सही छ । महिला सशक्तिकरणमा लागेर यसलाई कम गर्न सकिन्छ । अरब जाने हाम्रा दिदीबहिनी मालिकको घरमा कैद भएर बस्नुपर्छ । अतः आफ्नो देशको असुरक्षा कम गरौं, तर अरुको देशमा नजाऔं ।
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७६ ११:४१